legend, Author at Legend Myanmar Technology
ယခုလက်ရှိသုံးစွဲနေကြတဲ့ 5G Network ဆိုတာဘာလဲ?
by legend|17 September 2020 23 September 2020 |Blog
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပြီး ရင်းနှီးနေတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 5G Network ဆိုတာဘာလဲ? 5G Network မှာ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲ? အရင်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ 3G , 4G Network တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိမလဲ? ဒီလိုအကြောင်းတွေ အရင်မပြောပြခင်မှာ 5G Network က ဘာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ 5G ဟာ Cellular Network တွေရဲ့ ၅ ခုမြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့...
Industry revolution ကနေ တဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ Industry 4.0 ဆိုတာဘာလဲ?
by legend|14 September 2020 15 September 2020 |Blog
ယနေ့အပြိုင်အဆိုင်လည်ပတ်နေကြတဲ့ ကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ ကွဲပြားခြားနားကြသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးဟာစိန်ခေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ အချိန်နှင့် တပြေးရရှိနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုရယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။........
by legend|10 September 2020 10 September 2020 |Blog
စက်မှုတော်လှန်ရေး ( Industry Revolution ) ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လက်မှုပညာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုများမှ တစ်ဆင့် အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးရဲ့ အဓိကလက္ခဏာတွေ........
Office 365 ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
by legend|23 July 2020 10 September 2020 |Blog
Office 365 ဆိုတာ Microsoft က ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုံးနေကြ Office 2016 တို့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲ လစဉ်ကြေးပေးသွင်း၍ အသုံးပြုရသော Business App Suite တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Office 365 ...........
by legend|23 June 2020 08 July 2020 |Blog
Multi-factor & Two-factor Authentication ဆိုတာThe Authentication Method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Computer & Mobile Phone အသုံးပြုသူအား သက်သေအထောက်အထား 2ခု (သို့) 2ခုထက် ပိုသော အချက်အလက်များအား Two -factor Authentication Method သို့ ဖြည့်သွင်း ပြီးမှ သာ.......
by legend|18 June 2020 08 July 2020 |Blog
Honeypot ဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ decoy system ထောင်ချောက်တစ်ခုပဲ။ Production System ကို replicate လုပ်ထားတဲ့ fake system တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်။ Hacker က လာ hackပြီဆိုတာနဲ့ production ထဲ မဝင်သွားဘဲ Honeypot ထဲဝင်လာတယ်။ Hacker က Honeypot ထဲရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ hacker activities ကို learn လုပ်တယ်။ Attacker ကို ပြန်ပြီး attack လုပ်တဲ့ system တစ်ခုပဲ။.........
ကိုယ့် Company Security ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားသင့်လား?
by legend|18 June 2020 25 June 2020 |Blog
လက်ရှိအချိန်မှာ Digital Transformation ကိုဦးတည်လာတာနဲ့ အမျှ မိမိတို့မှာရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data များသည်လည်း Digital Format များဖြင့် Cloud ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ရုံးတွင်း Computer များ Server များတွင်လည်းကောင်း သိမ်းဆည်းလေ့ရှိလာပါတယ်။.........
by legend|18 June 2020 18 June 2020 |Blog
Network Operation Center (NOC) တွေကိုတော့ sensitive အရမ်းဖြစ်တဲ့ Enterprise Network တွေ မှာ အသုံးများပါတယ်။ example _ Banking sector, Telecon, ISP(Internet Service Provider) တွေမှာ အသုံး ပြုတာများပါတယ်။ Network Monitoring tools တွေ ကို ဘာကြောင့် .........
POE ဆိုတာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ POE ရဲ့အမည်အရှည်ကတော့ Power Over Ethernet လို့ခေါ်ပါတယ်။ POE ရဲ့ IEEE Standard ကတော့ IEEE802.3 ပါ။ POE ကို IEEE Standard ဖြင့် အဓိကထား ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် IEEE802.3 သည် POE ဖြစ်တယ်။ အခု ကျွန်တော်က POE ဆိုပြီး ပြောနေတယ်။ POE က Power Over Ethernet လို့ ခေါ်တယ်။.........
Window Deployment Services ( WDS )
ကျွန်တော်အခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ WDS လို့ခေါ်တဲ့ Window Deployment Service အကြောင်းကိုဖေါ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Window Deployment Service သည် Window Server 2008 .........
© 2020 LMT is Proudly Powered by Nanolabs.